एमाले ब्युँताउनेहरू रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका ‘डाइ हार्ड फ्यान’ « Jana Aastha News Online
एमाले ब्युँताउनेहरू रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका ‘डाइ हार्ड फ्यान’
प्रकाशित मिति : १८ असार २०७७, बिहीबार १२:३७
एउटा फोटोमा नेकपा एमाले प्रदेश नं. १ की सचिव भनिएकी अस्मिता सुनारले प्रधानमन्त्रीको घुँडामा आफ्नो कुहिनो अड्याएकी छन् ।
नेकपाभित्रको विवाद चुलिँदै गएको समयमा मदन भण्डारी जयन्तीको अवसर छोप्दै आइतबार निर्वाचन आयोगमा पूर्व एमाले दर्ताको लागि निवेदन हाल्नेहरु पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवको अपहरणमा सम्लग्न पूर्व उध्योगमन्त्री महेश बस्नेत निकट रहेको र तिनको महेशमार्फत शीतल निवास र बालुवाटारसम्म राम्रो पहुँच पुगेको प्रमाण भेटिएको छ । नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश नेताले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा एकीकरण भइसकेको पूर्व एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ताको लागि आफ्नो ‘गुटका कार्यकर्ता’ प्रयोग गरिएको बताएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा एमाले दर्ताको निवेदन हालिएको प्रमाण आफूसँग भएको बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँग सामुहिक रूपमा खिचिएको एउटा फोटोमा नेकपा एमाले प्रदेश नं. १ की सचिव भनिएकी अस्मिता सुनारले प्रधानमन्त्रीको घुँडामा आफ्नो कुहिनो अड्याएकी छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यसो गर्नु ठीक नभएको ढंगले प्रधानमन्त्रीका अंगरक्षकले सुनारलाई पछाडिबाट सतर्कतापूर्वक नियालेको देखिन्छ । त्यसैगरी फोटोमा महेश बस्नेतसँगै उभिएका व्यक्ति जयराम राउत (सखुअवा-४,रौतहट) हुन् जो निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको लागि हालिएको निवेदनमा एमालेको प्रदेश नम्बर तीनका सचिव उल्लेख छ ।
भक्तपुरको सडकमा खिचिएको अर्को सामुहिक फोटोमा सो क्षेत्रका नेकपा तथा पूर्व एमाले सांसद महेश बस्नेतसँगै एमाले प्रदेश नं. १ की सचिव अस्मिता सुनार र उपाध्यक्ष भनिएकी भगवती खड्का देखिन्छिन् । फोटोमा दुई औंला ठड्याउँदै गरेकी अस्मिता सुनार हुन् भने भगवती खड्का महेश बस्नेतको ठीक पछाडि रातो टिका लगाएकी हुन् ।
यसबीच यीमध्ये उपाध्यक्ष खड्काले सामाजिक सञ्जालमा ‘कुर्सीको लागि होइन, देशको लागि ओली चाहिन्छ । सत्ताको लागि होइन, देश बचाउन ओली चाहिन्छ । पदको लागि होइन, देश विकासको लागि ओली चाहिन्छ । भारतीय विस्तारवादलाई तह लगाउन ओली चाहिन्छ । देशको शान,मान र इज्जत : हाम्रो बा केपी ओली, जिन्दावाद’ लेखेकी छन् । रामेछापकी खड्काको महेश बस्नेत र प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै नभएर राष्ट्रपतिसँग समेत राम्रै पहुँच भएको अर्को फोटोले पुष्टि गरेको छ ।
उता, एमाले प्रदेशनं. ३ का सचिव भनिएका जयराम राउतले पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रचण्डलाई सत्ता बुझाउनु भन्दा एमाले ब्युँताउनु ठीक’ लेखेका छन् । स्रोतका अनुसार ती सबैले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘डाई हार्ड फ्यान’ बताउने गरेका छन् ।
यी सबै परिदृश्यले बैशाखको पहिलो साता सरकारले रातारात राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण ठहर्याइएको छ । त्यसैगरी, नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बखत मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा पुरानो एमाले दल दर्ता गराउने काममा प्रधानमन्त्री निकटहरूको संलग्नताले सबै कुरा छर्लङ्ग हुँदै गएको छ ।